Ogaden News Agency (ONA) – Sawiro Kulanki Jaaliyada Ogadeniya ee Denmark iyo Sheekh Nuur Ugaas Gaata
Sawiro Kulanki Jaaliyada Ogadeniya ee Denmark iyo Sheekh Nuur Ugaas Gaata
Posted by ONA Admin	/ March 20, 2012
18/03/2012, waxaa shir baaladhan oo siwanaagsan loosoo agaasimay laguqabtay xafiiska Jaaliyada Somalida Ogadenya ee wadanka Denmark ee kuyaala caasimada Copenhagen.
Shirkan ooy kasoo qaybgaleen dad badan ooy kamid yihiin gudiga maamulka jaaliyada, ururka OYSU ee wadanka Denmark iyo waliba dad kale oo shacab ah, waxaa shirka lagu marti qaaday Sheekh Nuur Ugaas Gaataa oo ah aqoonyahan udhashay Somalida Ogadenya khibrad dheerna uleh halganka gobanimadoon ee Ogadenya mudada dheer kasocday, sheekhu wuxuu mudo dheer kunool yahay wadanka boqortooyada Sacuudi Carabiya, hadana wuxuu socdaal gaaban kumarayaa qaar kamid ah wadamada Yurub oo socdaalkiisa uu kabilaabay wadankan Denmark.
Waxaa shirka lagu furay wacyi diini ah kadibna waxaa lagudagalay ajandihii shirka oo ahaa warbixin iyo waayo aragnimo qotodheer oo Sheekhu uu uleeyahay halganka kasocda Ogaadenya, wuxuu sifaah faahsan isu barbardhigay marxaladihii kala duwanaa ee halganku soomaray asagoo lakaashanaya aqoontiisa iyo khibrada mugawayn ee uleeyahay halganka Ogadenya.
Warbixinta oo aad udheerayd meelo badanna taabanaysay, wuxuu Sheekhu si hufan ugu hadlay xaalada dhabta ah ee maanta Ogadenya kajirta iyo sida naf lacaarinimada ah ee gumaysigu uu isugudayay asagoo adeegsanaya waxkasta oo uu awoodo sidii uu uminjo xaabiyo lahaa rabitaanka shacabka Soomaalida Ogadenya ee ah inay Ogaadenya kaxorowdo gumaysiga Abasiiniya.
Waxaana hadalka Sheekha kamid ahaa “ Xadgudubka kajira Ogadenya ee kufsiga, dilka, xadhiga, baro-kicinta iyo waliba boobka hantida shacka leh waa mid taariikhda casriga ah aysan horay usoomarin, oo qofkasta oo damiir banii,aadamnimo leh uusan rumaysan karin inuu jiro shacabka xaaladan oo kale aduunka kujira oon Ogadenya ka,ahayn”.
Wuxuu Sheekhu yidhi asagoo hadalkiisa siiwata“Qadiyada Ogadenya waa mid Soomaali wayn oo idil taabanaysa, waajibna ku ah qofkasta oo Soomaali ah inuu taageero sababtoo ah majiro qof uusan taabanin ama waxyeelo kasoo gaadhin xadgudubka joogtada ah ee wayaanuhu kawada Ogadenya, waana halganka kaliya ee maanta uu shacabkii Soomaaliyeed rajada ugu wayn kaqabo inay wayaanaha kusoo duulay kaxoreeyaan”.
Dhanka kale wuxuu Sheekhu aad ugu dheeraaday oo dadkii shirka kasoo qayb galay aad ugu riyaaqeen aayadaha Quraanka Kariimka iyo Axaadiithta Nabiga (C.S.W.S) ee kusaabsan halganka ee sheekhu soodaliishaday wuxuuna yidhi “Dhimashadu waa xaq laakiin waxaa ugu wanaagsan in xaqa lagu dhinto,, Ama waad dhiman oo janadaad gali ama waad kaguulaysan cadawga xaqdarrada kuhaysta Ogadenya. Qofkii kudhinta asagoo difaacya nasabkiisa, maalkiisa, dalkiisa, diintiisa & sharaftiisa waa shihiid, kii difaaci waayana waa dayuus waana ehelu naar”.
Sheekhu wuxuu amaan iyo bogaadin usoo jeediyay dhamaan jaaliyaadka Soomaalida Ogadenya ee aan marna kadaalin inay beesha caalamka gaadhsiiyaan gumaadka kasocda Ogadenya isla markaana utaagan siday ufashilin lahaayeen tabaha cusub iyo dacaayada raqiiska ah ee gumaysigu usoo safriyay qurbaha ayagoo kala hortagay mudaaraharaad iyo dacwad kadhan ah cadawga wayaanaha iyo waliba cadaw kalkaalka u,adeega gumaysiga, taasoo uu cadawgu kala kulmay waji gabax iyo khashif badan.
Warbixinta iyo guubaabada sheekha oo aad uqiimo iyo qaayo badnayd yaay aad ugu riyaaqeen dad waynihiin nasiibka uyeeshay inay kasoo qaybgalaan, wuxuuna shirku kudhamaaday jawi aad usareeya aadna loogu diirsaday.
nooloow waa nin adunka kalayaqaana